कञ्चनपुरमा जताततै सूर्य उदाएपछि शाही भन्छन्, ‘उम्मेदवार चयनमा कुनै आग्रह रहेन, त्यही कारण सफलता पायौं’ - Pahilo News
कवि तथा गीतकार राजेन्द्र थापाले एउटा गजल लेखेका थिए, ‘घाम पनि डुब्न मात्रै आउँछ हाम्रो सुदूरपश्चिममा ।’ तर, यस पटक त्यस्तो भएन । सुदूरपश्चिममा घाम अर्थात् सूर्यले अस्ताउन मात्र चाहेन, सुदूरपश्चिमको अन्तिम विन्दु कञ्चनपुरमा एमालेको सूर्य अपत्यारिलो तरिकाले उदायो ।
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले कञ्चनपुरको आठ तहमध्ये ५ तहमा चुनाव जितेको छ । सो जिल्लामा एमालेले एकल जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने भएको छ । तर, कञ्चनपुरमा एमालेले पाएको सफलताको पछि युवा नेतृत्वको सक्रियता र क्रियाशीलता प्रमुख रह्यो ।
एमालेका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य एवं कञ्चनपुर इन्चार्ज विक्रमबहादुर शाहीले कञ्चनपुरमा एमालेको झन्डा फहराउन दिनरात क्रियाशीलता देखाए । उनलाई सघाउन कञ्चनपुरका जिल्ला अध्यक्ष तारा लामा तामाङ पनि उत्तिकै खटे । अन्ततः एमालेले विजयको झन्डा फहराएरै छाड्यो । कञ्चनपुरमा एमालेले पाएको सफलता र सिंगो ७ नम्बर प्रदेशको चुनावी अवस्थाबारे वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य शाही के भन्छन् त ? उनीसँग गरिएको संवादः
–प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहप्रदेश ७ नम्बरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बन्न पुग्यो । यो कसरी सम्भव भयो ?
० प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डको राजनीतिक एजेन्डाहरु नै गलत थिए । यो निर्वाचनबाट जनताले ती एजेन्डालाई अस्वीकृत गरिदिएका छन् । एमालेको नीति, कार्यक्रम, विगतमा पार्टीको सरकार हुँदा गरेका जनपक्षीय कामहरु, संविधान निर्माण प्रक्रियामा पार्टीले खेलेको भूमिका, राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि नाकाबन्दीको बेला लिएको अडानलाई जनसमुदायको व्यापक समर्थन रहेको कुरा पुष्टि भएको छ ।
जनताले संविधान संशोधनको नाममा हिन्दी भाषालाई मान्यता दिने, प्रदेशको पुनःसीमांकन गर्ने, हिमाल पहाड तराईलाई छुट्याउने, स्थानीय तहका अधिकारहरुको कटौती गर्ने जुन षड्यन्त्र भइराखेको छ, यो चुनाव त्यसका विरुद्ध आफ्नो अभिमत जाहेर गरेका छन् ।
त्यसै गरी यो क्षेत्रको पार्टीको साङ्गठनिक काममा केन्द्रीय नेतृत्वमा रहनुभएका नेताहरु, प्रदेश नेतृत्वको निरन्तरको समन्वय, सहयोग एवम् निर्देशन, जिल्लामा रहेका पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिको सक्रिय परिचालनबाट यो परिणाम हासिल भएको हो ।
–तपाई इन्चार्ज हुनुभएको कञ्चनपुरमा एमाले कमजोर थियो । तर, आश्चर्यजनक परिणाम आएर एकल बहुमत प्राप्त गर्यो नि ?
० कञ्चनपुर जिल्ला पार्टी कामका हिसाबले ७ नं. प्रदेशकै पुरानो जिल्ला हो । पार्टीमा ठूलो संख्यामा इमानदार एवम् लगनशील कार्यकर्ताहरुको पंक्ति छ । तर, विगतका निर्वाचनहरुमा नेताहरुका व्यक्तिगत इख, एक अर्काप्रतिको अविश्वास एवम् गुटबन्दीको सिकार भएकै कारण पटकपटक असफलता बेहोर्दै आएको कुरा साँचो हो । यस पटक हामीले उम्मेदवार छनोटकै बेलादेखि बिना कुनै पूर्वाग्रह स्थानीय कमिटीहरुका सिफारिसलाई नै आधार मानेर अगाडि बढ्यौं । उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो कुनै आग्रह रहेन । केही ठाउँमा उम्मेदवारका बारेमा असन्तुष्टिहरु थिए, तिनलाई पनि मिहिनेतपूर्वक व्यवस्थापन गर्यौ र पुरै पार्टी पंक्ति निर्वाचनमा परिचालित भयो । नेता धेरै, उपलब्धि थोरै हुने जिल्लाको रूपमा चिनिएको कञ्चनपुर जिल्ला यसपटक भने सबै नेता कार्यकर्ताको इमानदार प्रयत्नले त्यो बुझाइलाई गलत साबित गरिदिएको छ ।
पहिलो त, एमालेलाई घेराबन्दीमा पार्न माओवादी र कांग्रेस लगायतका दलले अपवित्र गठबन्धन बनाए । ती जिल्लाहरुमा उनीहरुको विगतमा पनि दरिलो उपस्थिति थियो ।
अर्को कारण चाहिँ नेताहरु अलि बढि नै आशावादी देखिए । निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्न मसिनो ढंगले योजनाहरु बनेनन् । रणनीतिक योजनाहरु नै बनाइएन ।
उम्मेदवार छनौटका बेला ती स्थानहरुमा देखिएका असन्तुष्टिको व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी रहेको देखिन्छ भने केही स्थानमा उम्मेदवार चयनमा स्थानीय स्तरको मागभन्दा नेताहरुको अनुहार हेरेर निर्णय गरिएजस्तो पनि लाग्यो ।
–प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट राज्यशक्तिको दुरुपयोग भयो भनिरहनुभएको छ । यो विपक्षले लगाउने आरोप मात्र हो कि त्यसमा सत्यता पनि छ ? यसबारे केही ठोस उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ?
० शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड दुवैले निर्वाचनको बेला राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरेका छन् । प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरको निर्वाचन क्षेत्र कञ्चनपुर १ मा मात्रै जिविसमार्फत वैशाख र जेठमा ७ करोड बजेट सिधै केन्द्रबाट पठाइयो र माओवादी कार्यकर्ता सम्मिलित उपभोक्ता समितिहरुमार्फत निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी रकमको चरम दुरुपयोग गरियो । त्यसै गरी देउवाका विश्वास पात्र मन्त्री रमेश लेखकले विभिन्न कागजी योजनाको शिलान्यास, उद्घाटनको नौटंकी गरे । सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरी गाउँगाउँमा विभिन्न नक्कली योजनाका सर्भे गर्ने, जग्गाको फर्जी नापी गर्ने आदि कामबाट प्रभावित गर्न खोजे । पैसा बाँड्ने, भोजभतेर गर्ने त काङ्ग्रेसको उहिलेदेखिको चलन नै भयो । देउवा पत्नीको प्रभावमा रहेका गैरसरकारी संघसंगठनलाई पार्टीको प्रचारमा परिचालन गरेको पाइयो ।
–तपाईं शेरबहादुर देउवासँग चुनाव पनि लड्नुभयो, डडेलधुरामा लामो समय पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो । के अबको चुनावमा डडेलधुरामा एमालेले जित्न सक्छ ?
० २०४८ सालदेखि हालसम्म देउवाले डडेलधुरा जिल्लाबाट निरन्तर चुनाव जित्दै आइरहेका हुन् । अब अवस्था त्यस्तो रहेन । पहिलो कुरा त, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको राजनीतिक एजेन्डाप्रति नै जनसमुदायको सहमति छैन । अर्को अब डडेलधुरेली जनताले परिवर्तन चाहिरहेका छन्, देउवा परिवारको हैकमवादी नीतिले स्वयं काङ्ग्रेस कार्यकर्ता नै आजित भइसकेका छन् । त्यहाँ कमिटी प्रणाली नै छैन, नारायणथानको इच्छामा सबै गतिविधि सञ्चालित देखिन्छन् । २१ औं शताब्दीमा अर्को राणा शासन स्वीकार गर्ने पक्षमा अब डडेलधुरेली जनता छैनन् । तसर्थ अब डडेलधुरामा एमालेको विजयलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
–नेताहरुले विभिन्न ठाउँमा अन्तरघात भयो भनिरहनुभएको छ । सात नम्बर प्रदेशमा त्यस्तो कत्तिको देख्नुभयो ?
० निर्वाचनमा पराजित हुँदा अन्तर्घात भयो भन्ने जित्दा चाहिँ आफू पपुलर भएर जितेको भन्ने चलन नै भइसकेको छ । कमिटी प्रणाली अनुरुप नचल्ने, व्यक्ति–व्यक्तिको सम्बन्धका आधारमा पार्टी गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्ता समस्या आएका हुन् । हाम्रो प्रदेशभित्र अन्तर्घात नै भएको त म भन्न सक्दिनँ तर उम्मेदवार तय गर्ने बेलादेखि नै केही ठाउँमा असन्तुष्टिहरु रहेको र त्यसका कारण सम्पूर्ण कार्यकर्ता पंक्ति उत्साहित भएर प्रचार अभियानमा क्रियाशिल हुन नसकेको चाहिँ हुन सक्छ । सम्बन्धित जिल्ला नेतृत्वले ती सबै असन्तुष्टि र असमझदारीको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । त्यसको असर स्वाभाविक रुपमा निर्वाचन परिणाममा पर्न गयो ।